कब्जियतबाट जोगिने ८ घरेलु उपाय
भदौ ८, २०७४ बिहिवार १५:४९:०० प्रकाशित
कब्जियत साझा स्वास्थ्य समस्या हो । यसले पेटमा गम्भीर गडबडी भएको संकेत गर्छ । सबै उमेरका मानिसमा देखिने यो रोगबाट विशेषगरी वृद्धवृद्धा पीडित छन् । कतिपय कब्जियतपीडित चिकित्सकको औषधि खाइरहेका छन् भने कतिपय घरेलु उपचारमै निर्भर छन् । विज्ञहरुका अनुसार कब्जियतका लागि घरेलु उपचार अन्य औषधिभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । कब्जियतबाट मुक्त हुने आठ तरिका
पानी कब्जियतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उपयुक्त औषधि हो । बारम्बार प्रशस्त पानी पिएर वा झोलयुक्त खाना खाएर कब्जियत रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ । तर, पानीको नाममा सोडा वा अन्य पेय पदार्थ पिउनु कब्जियतको समाधान होइन । धारा वा कुवाको सफा पानी तताएर वा ‘प्युरिफाई’ गरेर पानी खाँदा कब्जियतको खतरा घट्नुका साथै कब्जियत भइसकेका व्यक्तिलाई पनि धेरै फाइदा गर्छ।
हामी शरीरलाई चाहिने खानाको सट्टा अन्य अनावश्यक खानेकुरा खाएर पैसाको हिनामिना गरेका हुन्छौँ । तर, त्यही पैसाबाट पोसिलो र शरीरलाई हित गर्ने स्वस्थकर खानाको बारेमा हेक्का नराख्दा हामीले स्वास्थ्यमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छाै‌ँ । जौ, गहुँ, रोटीजस्ता फाइबरयुक्त खााना पोसिलो मात्र होइन कब्जियतका लागि महत्वपूर्ण औषधि नै साबित भएका छन् ।
फलफूल तथा सागसब्जी
ताजा फलफूल तथा सब्जी उच्च पोषणयुक्त मात्र होइन, त्यसमा प्रशस्त फाइबर र तरल पदार्थ हुन्छ । यो हाम्रो समग्र पाचन पक्रियामा फाइदाजनक हुन्छ । तसर्थ, प्रशस्त हरियो सागसब्जी र ताजा फलफूल खाँदा कब्जियतको सम्भावना हुँदैन र भइसकेको कब्जियत पनि निको हुन्छ ।
भिटामिन र प्रोटिनयुक्त गेडागुडी र बिउबिजनको नियमित उपभोगले कब्जियतलाई स्वभाविक रुपमै अन्य गरिदिन्छ ।
जैतुनको गेडा, सब्जीको रस, भटमासको तेल, तिलको गेडा पनि कब्जियत उपचारमा प्रयोग हुन्छ । यी खाद्य पदार्थमा निकै न्यून मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुनुका साथै आन्द्रालाई चिप्लो बनाई पेटको उकुसमुकुस र डम्म हुनबाट रोकिदिन्छ ।
उखुको जुस, खुदो र मह
कब्जियतका लागि उखुको जुस, खुदो र मह अचुक औषधि हुन् । उखुको जुसमा आवश्यकताअनुसार मह मिसाएर खाँदा यसले राम्रो औषधिको काम गर्छ ।
अंगुर र कागती
उच्च साइट्रस एसिडयुक्त अंगुर र कागतीले आन्द्राको फोहोरलाई सजिलै
मलद्वारमार्फत निष्कासन गरिदिन्छ । थोरै मात्र अंगुर र कागती जुसले पनि यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिदिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार उठबसलगायतको शारीरिक व्यायाय पनि आन्द्रामा रहेको स्टुल फाल्नका लागि उपयुक्त तरिका हो ।
१. जुम्लाका १९ वडा स्वास्थ्य चौकी विहिन
२. स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर र नर्सको छुट्टा छुट्टै धर्ना, माग पुरा नभए कडा अान्दाेलनमा उत्रने चेतावनी
३. यी हुन् सम्पत्ती विवरण नबुझाउने स्वास्थ्यका कर्मचारी, कारबाही गर्न निर्देशन
४. सरकारी अस्पतालबाट एलोप्याथिकसँगै आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक उपचार दिने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ : सामाजिक विकास मन्त्री बराल
५. संसद्‌मा गगन थापाको प्रश्न– स्वास्थ्यका विषय नबुझिएको कि हेलचेक्र्याइँ गरिएको?
६. प्रदेश ७ का जिल्लाहरुमा एचआईभीको संक्रमण दर घट्यो
७. काठमाडौंमा १४ औं सार्क एकेडेमी अफ अफथाल्मोलोजी सम्मेलन सुरु
८. अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या के हो ? के कारणले हुन्छ ?
९. प्रतिकिलो रु २० मा जडीबुटी निर्यात
१०. नर्सिङ पेसा : आफ्नो समस्या बिर्सेर बिरामीको अगाडि हाँसेर सेवा गर्नुपर्छ
१. योगले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्छ : डा वासुदेव उपाध्याय
२. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सरुवाको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने, विधेयक दर्ता
३. योग : कसले किन गर्ने?
४. स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मको योगासन (फोटो फिचर)
५. कालीकोटमा किशोरीलाई पनि आइरन चक्की खुवाइने